केराको बोक्रामा जब चिप्लिइ कनिका
12th October 2018, 06:24 pm | २६ असोज २०७५
कनिका चकित भएकी थिइन् कान्तिपुरको फोहर देखेर। उसले शहर अहिले जति फोहर भएको कहिल्यै देखेकी थिइन। दरबारमार्ग त सँधै चिटिक्क हुन्थ्यो। सिक्किमको एमके गान्धी रोड जस्तो शहरको आकारको तुलनामा निकै छोटो दरबारमार्ग सबैको प्रिय थियो। तर, अहिले यो कुरूप भएको छ।किंग्स-वे अर्थात् राजाको बाटो। राजाकै बंश विनाश भइसकेपछि बाटोको विनाश हुनु कुन ठूलो कुरो भो र! उसले देखि यो पटक दशैंमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढे पनि कान्तिपुर शहरको स्तर बढेको छैन। पसलहरू चिनियाँ सामानले भरिएका छन्। बजारमा कुनै एउटा सामानको मूल्य तीन हजारबाट शुरू हुन्छ र तेह्र सयमा टुँगिन्छ। बार्गेनिङका लागि नै सत्र सयको अन्तर राखेपछि सामानको गुणस्तरको बारेमा सोध्नै परेन।
बजार जति अस्तव्यस्त र फोहर देखिन्छ मन्दिरहरू त्यति नै फोहर देखिन्छन्। कनिकाआफ्नो इलेक्ट्रोनिक कार चढेर शोभा भगवती पुग्दा उसको मन खिन्न भयो। दृष्यहरू निकै नराम्रा थिए। मन्दिरको राम्रो सफाई गरिएको थिएन। दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरू धेरै थिएनन्। तर उनीहरूलाई सही ढंगले गर्ने व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। मन्दिरको व्यवस्थापनमा राजनीतिको प्रवेश भएको छ। पहिले एउटै व्यवस्थापन समिति थियो। मन्दिरको आम्दानी बढ्दै गएको देखेपछि अर्को पनि समिति खोलियो। अब यो समितिले के गर्ने? मानिसहरू उनै। कल्पनाशीलता उही। अब शोभा भगवतीको शोभा कसरी बढ्ने? कनिकाले अनुभूत गरिराखेकी थिई देशको हरेक क्षेत्रमा झगडा छ। चाहे मन्दिरमा होस् या अस्पतालमा। कहीं गए पनि सामान्य मानिसलाई सुख छैन।
शोभा भगवतीबाट कनिका लागि गुह्येश्वरीतिर। कान्तिपुरको सबैभन्दा पुरानो शक्तिपीठका रूपमा रहेको गुह्येश्वरीको हालत पनि शोभा भगवतीको भन्दा खराब थियो। फूल पसलेहरू अस्तव्यस्त थिए। पुलपारी असमेल बजार थियो। हरेक फूलवाल्नीले भक्तजनहरू आफ्नै पसलमा आउन् भन्ने फिराकमा देखिन्थे। कनिका पुग्नेबित्तिकै गुह्येश्वरीको ढोकैमा कसैको पकेट मारियो। दशैंको मुखमा वैदेशिक रोजगारमा दोहा उड्न तयार भएको केटो पशुपति गुह्येश्वरीको दर्शन गर्न आएको थियो। धन्य उसको वालेटमा धेरै पैसा राखेको थिएन। वालेटको उसलाई खुब माया लागिरहेको थियो। उसले कनिकालाई बतायो– ‘अर्चलाले दिएकी थिई त्यो वालेट। विदेशी भूमिमा त्यो वालेटले उसको सम्झनालाई तिखो बनाउँथ्यो। अब त्यो भएन। वालेटसँगै अर्चलाको फोटो पनि हरायो। ’गुह्येश्वरीको दर्शन गरेपछि केटो लजतिर लाग्यो। उसको फ्ल्याइट थियो राति एघार बजे। केटाको उदास अनुहार देखेर कनिका आफै पनि उदास भइ। उसले नजिकै उभिएको इन्स्पेक्टरलाई सोधी– ‘त्यो केटाको वालेट पाइएला त?’ इन्स्पेक्टरले जवाफदियो– ह्या बहिनी पनि त्यत्रो तेत्तीस किलो सुनको ढिका त फेला परेन त्यो जाबो सानो वालेट के फेलापर्थ्यो!’ त्यसपछि इन्स्पेक्टर सुर्तीले पहेंँलिएको दाँत देखाएर हाँस्यो। उसको दाँत देखेर कनिकालाई वाकवाकी लाग्यो। तै पनि ऊ फिस्स हाँस्यो।
पशुपति गुह्येश्वरीको मन्दिर सोचे भन्दा निकै सफा थियो। समस्या यतिमात्रै थियो कि मन्दिर र मन्दिर वरिपरिका फोहर उठाएर गौरीघाट अगाडिको बाग्मतीको किनारामा माओवादीहरू भूमिगत जीवनबाट समाजमा खुला भएपछि जंगलचिरेर बनाइएको कच्चीबाटो तिलगंगाको छेउछाउ र सडकका पेटिमा थुपारिएको थियो। कनिकाले विचार गरी एउटा सानो राजधानी हो एक दर्जन मन्दिर वरिपरिका फोहर हटाउन नसक्ने सरकारले देशमा थुप्रिएको फोहरको थुप्रो कसरी हटाउने हो?
कान्तिपुर शहरमा थुप्रिएको फोहर फाल्ने र पुर्ने कुनै ठाउँ बाँकी छैन। शहरको फोहर आफ्नो गाउँको छेउ किनारमा थुपार्न कुनै गाउँपालिकाले दिंँदैन। मानिसहरूसँगै फोहर बढ्दै जान्छ, नाली थपिंँदै जान्छ। जीवन झनझन् कष्टकर हुँदै जान्छ। सरकार चलाउने कसैमा पनि शहरको चिन्ता देखिंँदैन। शहरले मानिसलाई सुविधा दिएको छ। टाउको लुकाउने छाना दिएको छ। तै पनि मानिस कान्तिपुर शहरप्रति कृतज्ञ हुन सकेको देखिंँदैन। कनिका सोच्छे मानिसको सचेत मनमा यो कुरा कसरी घुसाउने होला?
पशुपतिको मूलढोकाबाट बाहिर निक्लेर उ जुत्ता राख्ने ठाउँतिर जाँदैथिई। केराको बोक्रामा चिप्लिएर सडकमा नै थेचारिई। उसको पुठ्ठो नराम्रोसित दुख्यो। कुहिना पनि दर्फरायो। उसको आँखुबाट तपक्क आँसु चुहियो। उसले मुन्टो उठाएर हेरी एउटा बाँदर उसलाई जिस्क्याइरहेको थियो।